ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မြေးဖြစ်သူ ဖိုးလပြည့် က အာဏာကို ဆက်ခံမည် မဟုတ်ဟုဆို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မြေးဖြစ်သူ ဖိုးလပြည့် က အာဏာကို ဆက်ခံမည် မဟုတ်ဟုဆို
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မြေးဖြစ်သူ ဖိုးလပြည့် က အာဏာကို ဆက်ခံမည် မဟုတ်ဟုဆို
Posted by Yin Nyine Nway on Sep 10, 2010 in Myanma News | 12 comments
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဘ၀ဖြင့် သေတစ်ပန် သက်တစ်ဆုံး အရိုးထုတ် သွားမည့် မြန်မာ စစ် ခေါင်းဆောင်၏ မြေး နေရွှေသွေးအောင် (ခေါ်) ဖိုးလပြည့် မှာ သူ၏ အဖိုး ဖြစ်သူ က အာဏာ လွှဲပေးရန် အကြောင်းဖန် ပါလာ ပါကလည်း သူ့အနေဖြင့် လွှဲပြောင်း လက်ခံ ရယူမည် မဟုတ်ကြောင်း ယခု သီတင်းပတ် အတွင်းက သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူများအား သူ၏ ရဟတ်ယာဉ် မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားကို မင်္ဂလာဒုံ လေယာဉ်ကွင်းတွင် ကျင်းပစဉ် အထက်ပါ အတိုင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။
euro တစ်သိန်းခွဲ ဆိုတော့ မြန်မာလို ကျပ် သိန်း ၁၈၀၀ လောက် ရှိမှာပေါ့နော် .. ဒါတောင်မှ လက်ဆောင်ပေးတာ လို့ ဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး အခွန်ငွေ ဆောင်ထားတာ ဘယ်လောက် ရှိသလဲ ဆိုတာကို သိချင်လိုက်တာ ..
အေး…. အဲ့သည်လူရမ်းကား အာဏာဆက်ခံမယ်ဆိုရင်လည်း သည်တိုင်းပြည်ကနေ အမြန်ဆုံးထွက်ခွာတော့မယ်…
“ယူရို ငွေတစ်သိန်း ခွဲ ကျော်ခန့် တန်ကြေးရှိသည့် ပြင်သစ် နိုင်ငံလုပ် လေးယောက်စီး Eurocopter EC 130 အမျိုး အစားကို လက်ဆောင်”
အဲလောက်များတဲ့ ငွေတွေ ဘယ်ကရလဲ။ ဘယ်သူ့ဆီကလဲ။ သူတို့က တော့အဲလိုသုံးဖြုန်း နေကြတယ်။ ပြည်သူတွေကို တစ်ချက်လောက်တော့ ငဲ့ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက်ငတ်ပြတ်နေတယ်ဆိုတာ။ နိုင်ငံတိုးတက်တယ်ဆိုတာ နေပြည်တော်ကို တင်တိုးတက်အောင်လုပ်နေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ တစ်နိုင်ငံလုံး ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တာကိုပြောတာ။ ကောင်းပြီးသားလမ်းတွေကို ဆက်ချဲ့နေလည်းအပိုဘဲ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လမ်းမကောင်းတာတွေ၊ သွားလို့မရတာတွေ တစ်ပုံကြီး ရှိတယ်။
ပြည်သူတွေကိုစောင့်ရှောက်မှ ပြည်သူတွေကချစ်မှာပါ။ ဒီအတိုင်းဆက်သွားနေရင်တော့နိုင်ငံချွတ်ချုံ ကြပြီး မွဲသထက်မွဲဖို့ ဘဲရှိတော့တယ်။ နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းတွေ၊ နယ်မြေတွေကို ရောင်းချတာ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေတဲ့သူတွေ တာဝန်လား။
ဖိုးလပြည့် က အာဏာကို ဆက်ခံမည် မဟုတ်ဟုဆို
ပြောခြင်တာက အာဏာကို ယူလို့ ရတယ် မယူဘူး
ကျွန်တော်တို့ တွေရဲ့ ဘဝတွေဟာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ထဲမှာ ရှိနေကြတယ် အဲ့သည်လိုလား?
အာဏာကို ဆက်ခံမည် မဟုတ်ဟုဆို ရအောင် သူတို့က မင်းဆက်တွေမှမဟုတ်ဘဲ.
ပြောကို မပြောချင်တော့တာပဲဗျာ… ပြောနေရင် အလိုလိုနေရင်း အကုသိုလ်ဝင်လွန်းလို့
အဲငပြည့်သာဆက်ခံရင် ပြည်သူတွေတော့ လစ်ပြီဗျာ သူဆက်ခံစရာလဲမလိုပါဘူး ဘာဆိုင်လို့ သူကဆက်ခံရမှာလဲ ဒါမျိုးက လုံးဝကို မဖြစ်သင့်ပါဘူးးးးး
သူတို့ ပဲကောင်းတယ်လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့ ရနေတယ်လေ..ဖြစ်ချင်တိုင်းလဲဖြစ်နေတာကို..။
ကံ ကောင်း တာ က သူ မ ယူ တဲ့ အာဏာ ကို ဘယ် သူ ယူ မှာ လဲ